Booliska Hindiya Oo baaraya 11 Qof Oo is dal dashay | Afrikada
Booliska Hindiya Oo baaraya 11 Qof Oo is dal dashay
Booliska wadanka Hindiya ayaa baaritaan aarin ka dhacday caasimadda wadanka Hindiya halkaasi oo ay xarko isku dal-daleen dad gaaraya 11 qof.
Booliska ayaa baaritaanno ku wada suurtagalnimada 12 Qof oo joogtey guriga ay isku daldaleen 11 xubnood oo guriga ka tirsanaa.
Wararka ayaa sheegaya in Axadii la soo dhaafay guriga lagu magacaabo Burari -House ay isku dal daleen 11 xubnood oo isku qoys ah. Waxaa intii aaney is dilin ay qoreen warqado iyaga oo soo jeedinayey in qoysku ay isku daldaleen arrimo la xiriira dhanka diinta oo ay ku dhaqmayeen ilaa sanadkii 2007-dii.
Mid ka mid ah booliska oo sharaxayey ayaa sheegay in ay baarayaan sababta keentay in uu furnaado albaabka hore ee reerka. Sarkaal ka mid ah baarayaasha ayaa yiri:”Labo arrin ayaanu baareynaa mida hore waa iyadoo laga yaabo in qoysku ay aaminsanaayeen in ay jiraan Duul ay aaminsanaayeen in ay iridda ka soo galayaan oo ay ka badbaadin doona marka ay xariga qoorta gashadaan in ay geeriyoodaan, tan kale waa qofka 12-aad ee goobta joogey xilliga ay dadkani is daldalayeen ayaanu sidoo kale baareynaa.”
READ MORE: DEG DEG: Xildhibaannada Kenya Oo dowladdooda ka Codsaday in milletriga KDF loo daabulo Yugaandha, lana afgembiyo Museveni?
Booliska magaalada Delhi ayaa sheegay in qoraallo ay gacnaha ku qabsadeen qof waliba oo qoyskaasi ka mid ahaa waxaana qoralladaasi qaarkood la diyaariyey sanadkii 2007-dii kolkaasi oo uu odaygii reerku geeriyoodey. “Qoyskani oo dhan ayaa waxaa laayey dhimasho ay iyagu gacantooda isku dilaan, isla markaasina waxaa la sheegay in qofka ugu yar reerka oo ah wiil lagu magacaabo ayaa Lalit Bhatia uu yahay ninka ugu yar ee saameynta ugu badan ay haleeshay,” sida uu ku waramay qof magaciisa aan sheegin.
Baaritaanno meydadka lagu sameeyay ayaa cadeynaya in 11-kaba uu midba mar is daldalay. 10 ka mid ah ayaa wadaagay hal kursi oo mid midka kale ka qaadanayey. Hooyada guriga oo odaygeedu waa hore dhintay ayaa iyagu si gaar ah isugu ceejisay qol gaar ah. Booliska ayaa baaraya in dadkani ay sumeysnaayeen ama daroogo ay cabeen.
Warqadaha la helay ayaan weli ka caawinin booliska in ay xaqiiqada helaan iyo sidoo kale 11 tuubooyin caag ah oo ka soo baxaya guriga saddexda dabaq ah.
READ MORE: DEG DEG: Recep Tayyip Erdogan Oo hogaaminaya Doorashooyinka Turkiga
Arrinta tuubooyinkani ayaa ah mid qarsoodi ah oo aan la ogeyn waxa loola jeeday waxaana boolisku ay xaqiiqsadeen in in 7 ka mid ah 11-ka hoos loo qaloociyey halka inta kale ay ay ka toosan yihiin.
“Arrintani waa xisaab la yaab leh marka la isku aadiyo waxa ay tilmaameysaa in 7 ka mid ah qoyska ay gabdho ahaayeen.” sidaa waxaa yiri baaraha dhibka meesha ka dhacay.
Dad deris la ahaa qoyska ayaa sheegaya in qoyska ay cayimeen in canuga ugu yar ee Lalit Bhatia uu riyo ku arki jirey aabihiis, isla markaasina canugaasi uu ahaa mid madaxa ka xanuunsan. “Lalit ayaa mar mar la arki jirey isaga oo keligiis isla hadlaya isla markaasina aabihii oo dhintay la hadlaya kolkaasi oo codkiisu isbedeli jirey , waxaana uu sheegi jirey in uu aabihii uu arko.
Baaritaannada qoyska ayaa sheegaya in wiilka lagu magacaabo Lalit Bhatia uu isagu mas’uul ka ahaa isla markaasina uu qoray dhammaan warqadaha isla markaasina uu reerka ku booriyey in ay falkan sameeyaan ugu dambeyntii.
READ MORE: Siyaasi Caan ah oo kashifay sababta FARMAAJO uga tacsiyeyn waayey NINKII LAGU GUBAY Muqdisho?